Fitsaboana fery maloto amin'ny fitsaboana amin'ny olon-dehibe amin'ny olon-dehibe
Eo amin'ny toetry ny tontolo iainana mahantra sy ny fomba fiainan'ny olona maro, sarotra ny mahita olon-dehibe tsy manana fanafody mandarin - angina. Ity aretina ity dia manana toetra hafahafa. Ny ankamaroan'ny olona mandritra io aretina io, dia lasa marefo ny fotsy hoditra. Amin'ny ankamaroan'ny olon-dehibe, ny fitsaboana ny fikolokoloana dia miteraka fanafodim-behivavy, tsy dia matetika - amin'ny fanampian'ny fanafody. Indraindray - any amin'ny hopitaly. Amin'ny ankapobeny, ny olona iray izay tafarina tamin'io aretina io, dia manadino izany mandritra ny fotoana lava na mandrakizay. Marina fa misy ny toe-javatra rehefa mitombo izy io, ary mamerimberina azy isan-taona.
Ny fitsaboana ny fery maloto nataon'ny vahoaka
Misy fanafody mahomby sy mahasoa izay manala angina sy tsindrona hafa amin'ny tenda - propolis . Io fanafody io dia manampy amin'ny dingana rehetra amin'ny aretina. Misy safidy roa azo ampiasaina: tincture ary amin'ny endrika maina.
Famaranana ny propolis
alika - 100 ml;
propolis - 10-30 g.
Ny propolis marefo dia latsa-danja. Manampy ny toaka. Asio 7-14 andro ao amin'ny toerana maizimaizina ao amin'ny efitra fisainana. Koa satria mila fotoana ela ny manomana azy io, dia manolo-tena hanao izany mialoha izany. Amin'io tranga io, ny fitsaboana amin'ny tendon-taonan'ny olon-dehibe amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny olona dia hahomby indrindra. Ny vahaolana vokatr'izany dia manempotra ny faritra ilana amin'ny tendany.
Mahatsiaro haingana ny fahatsapana mahatsiravina, na dia misy fahatsapana mahamay aza. Raha tsy nitranga izany - ireo singa ireo dia tsy mahazatra - tsara kokoa ny mitondra ny hafa ary manao vokatra vaovao.
Ny propolis maina dia kahina aorian'ny sakafo isan-karazany amin'ny 2 grama isan'andro dia tsy azo atao mihoatra ny in-telo.
Ny fitsaboana ny tendan'ny hodi-java-manify miaraka amin'ny fitsaboana ataon'ny vahoaka
Manome toro-hevitra marobe maromaro izay hanampy amin'ny fandresena io aretina io ireo manampahaizana manokana:
Fanaraha-maso ny fandriana.
Sakafo miaraka amin'ny fihinanan-kena sy sira. Tena ilaina ny manampy azy io sy ny maneso.
Misotroa iray farafahakeliny iray isaky ny ora.
Tenda amin'ny antsasak'adiny miaraka amin'ny vahaolana samihafa.
Ireto misy santionany vitsivitsy:
Tavoahangy rano mafana sy kristaly roa amin'ny permanganate potassium. Ny ranom-boasary dia hamadika tononkalo mora mora.
Kaopy misy rano voatsoaka sy sira kely kely.
Ny fahombiazan'ny tenany manokana dia nanolotra fampidiran-dra maromaro.
ranom-boankazo na salohim-bary , na karazan-tsakan'i St. John - 2 tsp;
rano - 1 fitaratra.
Vovon-tany maina mifangaro amin'ny rano ao anaty vilia. Manaova biriky rano mandritra ny 10-15 minitra. Alefaso mandritra ny adiny iray ny hafanana. Ny fiaraha-manidina miaraka amin'ny rano azo avy hatrany dia tokony farafahakeliny indray mandeha isan'ora.
Tratravon'ny hodi-tongotra - tsara sy ratsy
Ny fiterahana dia miala amin'ny sira
Shungite - fananana medikaly
Ny menaka dia tsara sy ratsy
Perga - toetra mahasoa
Tavolga - fananana medikaly
Ny fitsaboana ny asmma miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny ao an-trano
Sakafo fanosotra - 2 fametrahana mahomby ary ny zava-drehetra momba ny fampiharana ny afo
Bibidia mena - tsara sy ratsy
Inona no kitapo misy akanjo mivalona?
Jessica Alba sy ny vadiny Cash Cash dia nitsidika ny lalao baolina kitra niaraka tamin'ny zanany vavy kely indrindra Haven
Marika momba ny voromailala
Syndrome Shereshevsky-Turner - inona ireo mety ho an'ny fiainana ara-dalàna?
Fiarovana amin'ny mpampihorohoro any am-pianarana
Emicidine ho an'ny alika
Toby oval kafe
Zava-maniry maniry - saro-pady sy aretim-po
Sakafo avy amin'ny strawberries - fomba mahavariana mahasalama mahasalama mahasalama
Ny atidohan'ny atidoha
Ny atin'ny tranon-tsavonavona nohavaozina
Photoshoot amin'ny natiora amin'ny fahavaratra
Kissel avy amin'ny gooseberries
Kamomamy ho an'ny tarehy - fampiharana mahatsikaiky ny kôdily sy ny motera